လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမှုတွေ သိသိသာသာနည်းသွားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီနေ့ ဆန္ဒပြသူ ရာဂဏန်းလောက် လမ်းပေါ်ထွက် ချီတက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့လည် ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ထဲက လမ်းတွေပေါ်မှာ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးတွေ ရောက်မလာခင်မှာပဲ လူစုခွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲအကြောင်း ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကို မစုမြတ်မွန် ? ကပြောပြပါမယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့တော်မှာ မြန်မာ့အရေး အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကြား ဆွေးနွေးကြမယ့် ရက် မတိုင်ခင် ဒီနေ့ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ မြို့နယ်ပေါင်းစုံက လူငယ်တွေစုပေါင်းထားတဲ့ ဆန္ဒပြလူထုဟာ ရန်ကုန်မြို့လယ် လမ်းမတွေပေါ်ထွက်လာပြီး ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ထဲက ၃၂ လမ်းထိပ်ကနေစပြီး ရွှေဘုံသာလမ်းအထိ လူအင်အား ၃၀၀ ကျော်နဲ့ အနော်ရထာလမ်းမကြီးပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ရန်ကုန်ဗဟိုသပိတ် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ တာဝန်ခံ ကိုကေတူးက VOA ကိုပြောပါတယ်။
“ဒီသပိတ်ကိုလုပ်ဖို့ အခက်အခဲတွေ၊ အတားအဆီးတွေ တော်တော်များများရှိတာကို ကျနော်တို့တွေ့ရတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ဒီလမ်းပေါ်မှာလည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ သူတို့ယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီး ကင်းပတ်နေတာတွေ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ လူအုပ်ထဲမှာတင်ပဲ အရပ်ဝတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ လှုပ်ရှားနေတာတွေကို ကျနော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးထဲမှာကို ဒီလိုမျိုး သပိတ်တခုဖြစ်ဖို့ကို ရက်တော်တော်ကြာကြာကတည်းက အချိန်ယူသေချာ စောင့်ကြည့်ပြီးမှ လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လုပ်တော့လုပ်နိုင်လိုက်တာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့မှာ ခုနကပြောတဲ့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ ဖြစ်လာပါတယ်ဗျ။”
စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့လမ်းတွေပေါ် ပြည်သူ အလုံးအရင်းနဲ့ ထွက်လာပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရှိခဲ့ပေမဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့် ဧပြီလပိုင်းရောက်ချိန်မှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ သိသိသာသာ နည်းသွားခဲ့ပါတယ်။ တင်းကြပ်တဲ့ လုံခြုံရေးတွေကြား ပျောက်ကြားသပိတ် ပုံစံမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့ကြတာကနေ ဒီနေ့တော့ ဆန္ဒပြသူ ရာဂဏန်းပါဝင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ပြန်လုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီး ဆန္ဒပြလူထုကို အားပေးခဲ့ကြသလို၊ လမ်းပေါ်သွားလာနေတဲ့ ကားတွေကလည်း လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါ။ ဆန္ဒပြလူထုချီတက်ရာ လမ်းတလျှောက်မှာ ကားဟွန်းတီးပြီး အနှေးမောင်းပုံစံနဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေဟာ ကာရံပေးခဲ့ကြပါတယ်။
“ကျနော်တို့လည်း အဲဒီလောက်ထိ ကားသမားတွေကအစ ဒီလိုမျိုး ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ပူးပေါင်းပေးလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ တကယ့်တကယ် လက်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်ကျတော့ ကားသမားတွေကလည်း သူတို့ကားတွေကို ရပ်ပေးတယ်၊ နှေးနှေးလေး မောင်းပေးတယ်၊ တချို့ဆို ဟွန်းတွေဝိုင်းတီးပေးတယ်ပေါ့နော်။ တချို့ကျတော့လည်း ကားထဲကဆင်းပြီး လက်ခုတ်တီးပေးတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ လုပ်ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဒီလိုမျိုး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာ မရှိဘဲနဲ့ အဲလိုအခြေအနေမျိုးကို တွေ့ရတော့လည်း ကျနော်တို့ သပိတ်လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ ပိုပြီးတော့လည်း မျက်ရည်ကျမိတယ်၊ အရမ်းလည်း ဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့နော်။ ဒီလောက်ကြီး ပူးပေါင်းပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့မထင်ဘူး၊ သွေးအေးနေကြပြီပဲ ထင်တာပေါ့နော်။ အဲတော့ ကျနော်တို့ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ ပုံရိပ်မျိုးကိုလည်း ကျနော်တို့ ဒီနေ့မှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်တော့ အရမ်းလည်းဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျ။”
လုံခြုံရေးကြောင့် အချိန်ကြာကြာ ချီတက် ဆန္ဒပြပွဲ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီနေ့လုပ်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲဟာ ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့လည်း သူက မြင်ပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိပေမဲ့လည်း ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေ စုပေါင်းပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားတဲ့ ဒုတိယလှိုင်းကို ပြန်လည်ပြီးတော့မှ ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ ပထမဆုံးအဆင့် ခြေလှမ်းအနေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောကိုပဲ ရအောင်ယူလိုက်တာ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အဓိကတော့ အရင်လို သပိတ်တွေကို အကြာကြီးလုပ်ဖို့က ကျနော်တို့မှာလည်း အခက်အခဲ အများကြီးရှိတဲ့အတွက် ကြာချိန်ကတော့ ၁၅မိနစ် လောက်ထိတော့ လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ထိထိရောက်ရောက်တော့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။”
လာမယ့် မေလ ၂ရက်နေ့ကျရင်လည်း တကမ္ဘာလုံးက မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ အားလုံးပါဝင်မယ့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦး တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကို နိုင်ငံစုံမှာလုပ်ကြဖို့ စီစဉ်ထားကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံဘူးဆိုတာ ကမ္ဘာသိအောင် နိုင်ငံစုံမှာ ရောက်နေကြသူတွေက ညီညီညွတ်ညွတ်ပြသဖို့ ရည်ရွယ်ထားကြပါတယ်။
လမျးပျေါထှကျ ဆန်ဒပွမှုတှေ သိသိသာသာနညျးသှားတဲ့ ရနျကုနျမွို့မှာ ဒီနေ့ ဆန်ဒပွသူ ရာဂဏနျးလောကျ လမျးပျေါထှကျ ခြီတကျဆန်ဒပွကွပါတယျ။ ရနျကုနျမွို့လညျ ပနျးပဲတနျးမွို့နယျထဲက လမျးတှပေျေါမှာ ခြီတကျဆန်ဒပွခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ လုံခွုံရေးတှေ ရောကျမလာခငျမှာပဲ လူစုခှဲနိုငျခဲ့တဲ့ ဆန်ဒပွပှဲအကွောငျး ရနျကုနျကလာတဲ့သတငျးကို မစုမွတျမှနျ ? ကပွောပွပါမယျ။
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ ဂကြာတာမွို့တျောမှာ မွနျမာ့အရေး အာဆီယံခေါငျးဆောငျတှကွေား ဆှေးနှေးကွမယျ့ ရကျ မတိုငျခငျ ဒီနေ့ ဧပွီလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ မွို့နယျပေါငျးစုံက လူငယျတှစေုပေါငျးထားတဲ့ ဆန်ဒပွလူထုဟာ ရနျကုနျမွို့လယျ လမျးမတှပေျေါထှကျလာပွီး ခြီတကျဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ ပနျးပဲတနျးမွို့နယျထဲက ၃၂ လမျးထိပျကနစေပွီး ရှဘေုံသာလမျးအထိ လူအငျအား ၃၀၀ ကြျောနဲ့ အနျောရထာလမျးမကွီးပျေါမှာ လမျးလြှောကျခြီတကျ ဆန်ဒပွနိုငျခဲ့တယျလို့ ရနျကုနျဗဟိုသပိတျ ဖွဈမွောကျရေးကျောမတီ တာဝနျခံ ကိုကတေူးက VOA ကိုပွောပါတယျ။
“ဒီသပိတျကိုလုပျဖို့ အခကျအခဲတှေ၊ အတားအဆီးတှေ တျောတျောမြားမြားရှိတာကို ကနြျောတို့တှရေ့တယျ။ ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတော့ ဒီလမျးပျေါမှာလညျး အခြိနျနဲ့တပွေးညီ သူတို့ယူနီဖောငျးတှဝေတျပွီး ကငျးပတျနတောတှေ ရှိတယျ။ ပွီးတော့ လူအုပျထဲမှာတငျပဲ အရပျဝတျပုံစံမြိုးနဲ့ လှုပျရှားနတောတှကေို ကနြျောတို့တှရေ့တယျပေါ့နျော။ အဲဒီလို အခွအေနမြေိုးထဲမှာကို ဒီလိုမြိုး သပိတျတခုဖွဈဖို့ကို ရကျတျောတျောကွာကွာကတညျးက အခြိနျယူသခြော စောငျ့ကွညျ့ပွီးမှ လုပျတာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ လုပျတော့လုပျနိုငျလိုကျတာပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့ ကနြျောတို့မှာ ခုနကပွောတဲ့ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ စီစဉျထားတဲ့အတိုငျးတော့ ဖွဈလာပါတယျဗြ။”
စဈအာဏာသိမျးမှုဖွဈခဲ့ပွီးနောကျ ရနျကုနျမွို့လမျးတှပေျေါ ပွညျသူ အလုံးအရငျးနဲ့ ထှကျလာပွီး ဆန်ဒပွပှဲတှေ နစေ့ဉျရကျဆကျ ရှိခဲ့ပမေဲ့ စဈကောငျစီ တပျတှရေဲ့ ပဈခတျဖွိုခှဲမှုတှကွေောငျ့ ဧပွီလပိုငျးရောကျခြိနျမှာ ဆန်ဒပွပှဲတှေ သိသိသာသာ နညျးသှားခဲ့ပါတယျ။ တငျးကွပျတဲ့ လုံခွုံရေးတှကွေား ပြောကျကွားသပိတျ ပုံစံမြိုးတှေ လုပျခဲ့ကွတာကနေ ဒီနတေ့ော့ ဆန်ဒပွသူ ရာဂဏနျးပါဝငျတဲ့ ဆန်ဒပွပှဲကို ပွနျလုပျလာတာဖွဈပါတယျ။ စဈအာဏာရှငျ တျောလှနျရေး အမှတျအသားဖွဈတဲ့ လကျသုံးခြောငျးထောငျပွီး ဆန်ဒပွလူထုကို အားပေးခဲ့ကွသလို၊ လမျးပျေါသှားလာနတေဲ့ ကားတှကေလညျး လုံခွုံရေးဆောငျရှကျပေးခဲ့တာပါ။ ဆန်ဒပွလူထုခြီတကျရာ လမျးတလြှောကျမှာ ကားဟှနျးတီးပွီး အနှေးမောငျးပုံစံနဲ့ မျောတျောယာဉျတှဟော ကာရံပေးခဲ့ကွပါတယျ။
“ကနြျောတို့လညျး အဲဒီလောကျထိ ကားသမားတှကေအစ ဒီလိုမြိုး ဝိုငျးဝနျးပွီးတော့ ပူးပေါငျးပေးလိမျ့မယျလို့ မထငျထားခဲ့ဘူးပေါ့နျော။ တကယျ့တကယျ လကျတှဖွေ့ဈလာတဲ့ အခြိနျကတြော့ ကားသမားတှကေလညျး သူတို့ကားတှကေို ရပျပေးတယျ၊ နှေးနှေးလေး မောငျးပေးတယျ၊ တခြို့ဆို ဟှနျးတှဝေိုငျးတီးပေးတယျပေါ့နျော။ တခြို့ကတြော့လညျး ကားထဲကဆငျးပွီး လကျခုတျတီးပေးတဲ့သူတှေ ရှိတယျ။ လကျသုံးခြောငျးထောငျပွီးတော့ လုပျပေးတဲ့သူတှရှေိတယျပေါ့နျော။ ဒီလိုမြိုး ကွိုတငျပွငျဆငျထားတာ မရှိဘဲနဲ့ အဲလိုအခွအေနမြေိုးကို တှရေ့တော့လညျး ကနြျောတို့ သပိတျလုပျတဲ့လူတှအေနနေဲ့ ပိုပွီးတော့လညျး မကျြရညျကမြိတယျ၊ အရမျးလညျး ဝမျးသာမိတယျပေါ့နျော။ ဒီလောကျကွီး ပူးပေါငျးပါဝငျလာလိမျ့မယျလို့ ကနြျောတို့မထငျဘူး၊ သှေးအေးနကွေပွီပဲ ထငျတာပေါ့နျော။ အဲတော့ ကနြျောတို့ထငျထားတာထကျ ပိုပွီး ရနျကုနျမွို့မှာရှိတဲ့ လူတှရေဲ့ရငျထဲမှာ ဒီမိုကရစေီအရေး လှုပျရှားမှုတှကေို ရှိနသေေးတယျဆိုတဲ့ ပုံရိပျမြိုးကိုလညျး ကနြျောတို့ ဒီနမှေ့ာ တှလေို့ကျရတဲ့အတှကျတော့ အရမျးလညျးဝမျးသာမိပါတယျဗြ။”
လုံခွုံရေးကွောငျ့ အခြိနျကွာကွာ ခြီတကျ ဆန်ဒပွပှဲ မလုပျနိုငျခဲ့ပမေဲ့ ဒီနလေု့ပျတဲ့ ဆန်ဒပွပှဲဟာ ထိရောကျမှုရှိတယျလို့လညျး သူက မွငျပါတယျ။
“ကနြျောတို့ ဒီလိုမြိုးလုပျတယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြက အခကျအခဲတှေ အမြားကွီးရှိပမေဲ့လညျး ရနျကုနျမှာရှိတဲ့ လူငယျအဖှဲ့အစညျးတှေ စုပေါငျးပွီးတော့ ဒီမိုကရစေီအရေး လှုပျရှားတဲ့ ဒုတိယလှိုငျးကို ပွနျလညျပွီးတော့မှ ပထမဆုံးအကွိမျအနနေဲ့ ပထမဆုံးအဆငျ့ ခွလှေမျးအနနေဲ့ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျလိုကျတယျဆိုတဲ့ သဘောကိုပဲ ရအောငျယူလိုကျတာ ဖွဈတယျပေါ့နျော။ အဓိကတော့ အရငျလို သပိတျတှကေို အကွာကွီးလုပျဖို့က ကနြျောတို့မှာလညျး အခကျအခဲ အမြားကွီးရှိတဲ့အတှကျ ကွာခြိနျကတော့ ၁၅မိနဈ လောကျထိတော့ လုပျနိုငျခဲ့တယျပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့ ထိထိရောကျရောကျတော့ ဖွဈခဲ့ပါတယျဗြ။”
လာမယျ့ မလေ ၂ရကျနကေ့ရြငျလညျး တကမ်ဘာလုံးက မွနျမာ့အရေးလှုပျရှားသူ အားလုံးပါဝငျမယျ့ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ မွနျမာ့နှဦေး တျောလှနျရေးဆန်ဒပွပှဲတှကေို နိုငျငံစုံမှာလုပျကွဖို့ စီစဉျထားကွပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးတာကို လကျမခံဘူးဆိုတာ ကမ်ဘာသိအောငျ နိုငျငံစုံမှာ ရောကျနကွေသူတှကေ ညီညီညှတျညှတျပွသဖို့ ရညျရှယျထားကွပါတယျ။